« Dinam-pifanarahana » hoe ? | NewsMada
« Dinam-pifanarahana » hoe ?
«Teny ifanekena na ifanarahan’ny olona roa na maromaro ao anaty fiarahamonina, handaminana sy handrindrana ny fiainana,… ». Izay ny famaritana ny atao hoe « dina », araka ny hita ao amin’ny Rakibolana rakipahalalana. Fifanekena, fifanarahana, ireo ny azo lazaina hoe teny fanalahidy ao anatin’io famaritana io. Nampahafantatra, omaly, ny fijoroan’ny komity iombonana iray hoe hanara-maso ny fampiharana ny “dina ara-pitsipi-pitondrantena sy fahitsiana ho an’ireo kandidà hirotsaka hofidina amin’ny fifidianana filoham-pirenena.
Somary mahalasa eritreritra izay nambaran’io komity io fa hoe “tsy ifanerena ny fanaovan-tsonia izany dinam-pifanarahana izany fa ny mpifidy no hitsara izay manao izany na tsia”. Raha ny marina, na raha ny tokony ho izy, tsy tokony ho voakasik’izany avokoa ve ireo kandidà rehetra amin’izao fifidianana izao ? Tsy izay ve ny maha ”dinam-pifanarahana” azy ?
Raha ny tokony ho izy koa aza, tokony harahina ”velirano” na ”fianianana” ny fanekena izany fifanarahana izany. Ny ”velirano”, araka ny Rakibolana rakipahalalana” ihany dia hoe ”fanambarana ampahimbemaso, eo anatrehan’ny besinimaro, na eo anoloan’ny fitsarana fa marina izay hambara, hanatanteraka antsakany sy andavany izay nekena, ary hitana hatramin’ny farany ny teny nomena”.
Resaka ka atao fa firifiry izay fifanarahana nifanaovana hoe mba hisian’ny fitoniana, hialana na hisorohana ny fiverimberenan’ny krizy politika teto amin’ny firenena izay. Aiza izao anefa izao ny vokany ? Tsy nohajaina izay voasoratra, tsy noraharahana izay nifanekena, nivadihana tsotra izao mihitsy aza.
Azo eritreretina, na azo antenaina ve ny hananan’ireo kandidà ”fitsipi-pitondrantena sy fahitsiana”, raha izao zava-misy hita sy mitranga ankehitriny izao ? Ny sasany aza, efa nilaza ampahibemaso ny maha kandidà azy kanefa ao ambadika, mikotrika tetika maizina tsy hahatanteraka izany akory. Inona, aiza ny ”fahitsiana” amin’izany? Ny tsy tokony hohadinoina anefa, na hanao sonia na tsia izany ”dinam-pifanarahana” izany ireo kandidà, efa nitsara, mitsara azy ireo sahady ny vahoaka, ny mpifidy na mbola tsy manomboka akory aza ny fampielezan-kevitra.